Zọpụta ohere na diski gị na Diski Cleanup Pro, n'efu maka obere oge | Esi m mac
Nlekọta nke Mac anyị dịtụ mfe, n'ihi na belụsọ maka ọrụ ma ọ bụ ihe omume ntụrụndụ anyị na-etinye ngwa niile na iwepu ha, ọ chọghị ntọala dị mkpa.
N'agbanyeghị nke ahụ, anyị ga-enwerịrị ihe omume nke kwesịrị ntụkwasị obi ma na-enyere anyị aka nhicha diski diski anyị. Anyị na-ekwu maka nchekwa, faịlụ ebudatara mana "echefuru echefu", nbudata na-ezughị ezu ma ọ bụ mmemme nke anyị anaghịzi eji. N'okwu a, anyi kwesiri “all in one” iji mee ka oru anyi di nfe. Ihe atụ nke a bụ Disk nzacha na mkpocha Pro na ọ bụ n'efu maka obere oge.
Ihe mbụ ngwa ahụ mere mgbe ọ gbasịrị bụ nlele izugbe n'akụkụ nke ọ ga-eme ihe. Nke ahụ bụ ịsị, na-enyocha ihe ncheta anyị maka akụkụ ndị nwere ike iwepụ na anyị nwere ike wepu. Mgbe ahụ, na-egosi anyị ohere a ga-ehicha na mpaghara 4: ebe nchekwa, ndekọ, megharịa bin na ọdịda ndị dara.
Ọ na-ekele na tOzi a niile na-egosi anyị ya n'ụzọ dị mma mara mma, na Ogwe na-esonyere data na agba ndị nnọchianya. Banyere agba ndị a, ọ bụrụ na usoro ahụ ewere na otu n'ime ihe ndị a nwere ọtụtụ "nchekwa" echekwara nke nwere ike belata usoro anyị, ọ ga-egosi ya na-acha uhie uhie, odo ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ bụ ọkara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ uzo ma ọ bụrụ na ọnụọgụ nke ihe ihichapụ bụ ihe ezi uche dị na ya.
Mana Disk Clean Pro zuru oke, inwe ike ime ihe ụfọdụ kpọmkwem dị ka ihe nchọgharị ma ọ bụ na faịlụ buru ibu nke na-ewe akụkụ dị mkpa nke ebe nchekwa anyị. Ọ na-enye anyị ọrụ ndị ọzọ, dị ka ngwa wụnye na iwepụ njikwa iji nwalee ngwa ma ọ bụrụ na nke a adịghị amasị anyị, kpochapụ ọbụna obere nkọwa. Anyị ga-enwe ekele maka akụkụ a mgbe ejirila Mac anyị ọtụtụ ọnwa, site na ịhapụ faịlụ ndị nwere ike ibelata ikike nke sistemụ arụmọrụ anyị.
Na ihe a niile, ọ dị mkpa inye ngwa a n'efu ohere ga-ahapụ ebe nchekwa anyị dị ka ụgbọelu ọla edo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Zọpụta ohere na diski gị na Disk Cleanup Pro, n'efu maka obere oge
Tupu, ego ole ka ngwa ahụ ruru? Nnukwu peeji, ana m ekele gị maka ozi a niile, yana ụzọ m si enyocha bụ site n'ịkekọrịta na deactivating the ad blocker. Ezi echiche.
MacBook gafere 15 nde na 2017